Madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud oo soo dhaweeyey go’aanka Golaha Amaanka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud oo soo dhaweeyey go’aanka Golaha Amaanka
Madaxweyne Xassan Sh. Maxamuud oo soo dhaweeyey go’aanka Golaha Amaanka
March 6, 2013 - By: Hanad Askar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dib ugu laabtey magaalada Muqdisho ayaa wuxuu aad u usoo dhaweynayaa go’aanka Golaha Amaanka ee Qaramada midoobay ee ku aadan ka qaadista cunuqabeteynta hubka ee laga qaaday Dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Xassan Sh. Maxamuud ayaa yiri “Waxaa jirto xisaabtan iyo masuuliyad la socota go’aankaas.Golaha Amaanka Go’aankooda wuxuu si sax ah ula socdaa isbedelka cusub ee siyasadeed ee ka jira Soomaaliya.” Cunuqabateyntan ayaa Golaha Amaanka si qeyb ah uga qaadeen Dowladda Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in kumanaan oo Ciidamadda Xooga Dalka oo ay soo tababreen dalalka Soomaaliya saaxiibka la ah ay Soomaaliya dib ugu soo laabteen, laakiin ciidamadaas nasiib daro qalab la’aan ay caqabad ku noqotay si ay howshooda u gutaan.
“Dowladda waxey u mahad celineysaa Golaha Amaanka, qadarintooda iyo fahamkooda, waxeyna Dowladda Soomaaliya masuuliyad iska saareysaa dhamaan sharciyadda iyo sharuudaha la socda go’aanka Golaha Amaanku ay gareen, si waafaqsan nidaamka, kuna dhisan hufnaan”
Ugu danbeyntii Madaxweynaha ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ka qeyb qaatan dib- u dhiska dalkooda. “Talaabadan ayaa ah guul usoo hoyatay dhamaan Shacabka iyo Dowladda Soomaaliyo”.
Madaxda kale ee Soomaaliyaee soo dhaweysey waxaa ka mid ah raysalwasaare Cabdi Faarax Shirdoon, halka qaar kamid ah mamuladda dalku ay ku tilmaameen mid nasiib darro ah nabadana aan waxba ka tarayn.